SomaliTalk.com » 2012 » June » 01
Home » Archive Maalinta June 1st, 2012
Ururka Ahlusunnah oo Shirka Istanbul ku tilmaamay “Waqti Dhumis”, oo aysan aqbalayn wax kasta oo ka soo baxa…
Ururka Ahlusunnah Wal-Jamacaaca ayaa si kulul u dhaliilay shirka Istanbuul… Warsaxaafadeed ka soo baxay Ururka Ahlusunnah ayaa sheegay in aan ururukooda si rasmi ah loogu casumin shirka Istanbuul, waxaana kuwo la soo dhoodhoobay ay shirkaas ku tageen magaac Ahlusunnah ayagoo aan matalin ururka, ayuu yiri Eng. Cabdisalaan Aaden Xuseen oo ah madaxa arrimaah siyaasadda ee Ururka Ahlusunnah kuna...
Shirkii Istanbul oo Furmay
Waxaa maanta magaalada Istanbul maanta (May 31, 2012) ka furmay shirkii Soomaalida loogu qabanayey dalka Turkiga. Shirkaas waxaa ka qayb galay ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Mahiga, madaxweynaha DFKMG Sheikh Shariif, Ra’iisul wasaaraha DFKMG C/weli Gaas. Waxa kale oo ka qayb galay maamulada Puntland iyo Galmudug oo ay uga qayb galeen C/raxmaan Faroole iyo Caalim iyo ururuka...
31 May Maalinta Joojinta Cabista-Sigaarka ee Caalamka
Maanta oo ay bishu tahay 31 Maajo 2012 waa maalinta loo asteeyey joojinta cabista sigaarka ee caalamka, taasoo looga gol leeyahay in bulshada caalamka lagu wacyigeliyo khatarta uu leeyahay. Isticmaalka Tubaakada ama cabitaanka sigaarka waxay noqon kartaa : cabista sigaarka, Siigarka, Bayb-ka, Shiishadda, tubaakada la ruugo ama la calaliyo, midda daanka la gashado, iwm. Intaas oo dhan waxay keenayaan...